အင်္ဂလိပ်စာ သင်ခန်းစာ | UNITY ROHINGYA
ဇွန် ၂၇၊ ၂၀၁၁ – ဒီတပတ် အီဒီယံ အသုံးအနှုန်းများမှာ all the breaks, break the news, break even, break the ice နဲ့ takeabre
အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများမှာ touch down, kick off, game plan နဲ့ team player တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
put your house in order နဲ့ to clean house
Take = ယူဆောင်သည်၊ Stock = သိမ်းဆည်းထား၊ လှောင်ထားသည် ဖြစ်ပါတယ်။ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ လက်ကျန်ကုန်ပစ္စည်းတွေ ဘယ်၍ဘယ်မျှ ကျန်ရှိနေလည်းဆိုတာကို သိရအောင် စာရင်းကောက်ယူလုပ်ဆောင်ခြင်းလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံအသုံးမှာတော့ ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေကို အရှိအရှိအတိုင်း သုံးသပ်ကြည့်ခြင်း ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရှိပါတယ်။ နှစ်သစ်ရောက်လာတဲ့အခါ လူအများလုပ်နေကြ ထုံးစအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
အခု မိဘတဦးအနေနဲ့ သူတို့မိသားစု ပြီးခဲ့တဲ့အခြေအနေကို ဘယ်လိုပြန်လည် သုံးသပ်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း George Crows ပေးတဲ့ ဥပမာကို နားဆင်ကြည့်ကြပါ။
stag party, tailgate party နဲ့ baby shower တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာလရောက်ပြီးဆိုရင် ခရစ်စမတ်ပါတီ (Christmas party), နှစ်သစ်ကူးပါတီ (New Year party) ဆိုပြီးတော့ ကျင်းပကြပါတယ်။ အခုလိုမျိုးပါတီတွေအပြင် အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ သာမန်အချိန်တွေမှာ တခြားပါတီတွေလည်း လုပ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီ ပါတီဆိုင်ရာ အီဒီယံ အသုံးအနှုန်းများကို တင်ပြပေးသွားပါမယ်။
ပထမဦးဆုံးတင်ပြပေးမယ့် အီဒီယံအသုံးအနှုန်းမှာ stag party ဖြစ်ပါတယ်။ stag = သမင်ဖိုးဆပ်ဖို့ ဖြစ်ပြီး party = ပါတီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစကားလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ သမင်ဖိုပါတီ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံသွယ်ဝိုက် အဓိပ္ပါယ်ကတော့ အမျိုးသားတွေပဲ ပြုလုပ်တဲ့ပါတီပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပါတီပွဲကို တနေရာ၊ တအိမ်အိမ်မှာ အမျိုးသားတွေစုပြီး ဖဲဝိုင်းလုပ်တာ၊ တီဗွီမှာ လက်ဝှေ့ပွဲ၊ ဘောလုံးပွဲ တွေကို သောက်ကြ၊ စားကြ၊ ပျော်ကြပါကြတဲ့ ပွဲကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပါတီမျိုး ဖြစ်နိုင်သလို သတိုးသားတဦးအနေနဲ့ မင်္ဂလာမဆောင်မှီ တအိမ်အိမ်မှာစုပြီး အမျိုးသားတွေကြီး လုပ်တဲ့ပါတီကိုလည်း stag party လို့ ရည်ညွှန်းပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဒီအသုံးနဲ့ ပတ်သက်လို့ George Crows ပေးတဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
My elder brother doesn’t feel so good this morning. He gave our younger brotherastag party last night because he is getting married today. They stayed out way too late and way too much to drink.
ကျနော်အကိုတယောက် ဒီနေ့မနက် သိပ်မဟန်လှဘူး။ ဒီနေ့ မင်္ဂလာဆောင်မယ့် ညီငယ်အတွက် မနေ့ညက သူက အမျိုးသားတွေကြီးပါတဲ့ ပါတီတခုလုပ်ပေးခဲ့တယ်။ သူတို့ ညဉ်နက်အထိနေခဲ့ကြပြီး အလွန်အကျွံလည်း သောက်စားခဲ့ကြတယ်။
နောက်ထပ်တင်ပြမယ့် ပါတီစကားလုံးမှာ tailgate party ဖြစ်ပါတယ်။ Tailgate အဓိပ္ပါယ်က station-wagon ဆိုတဲ့ နောက်ဖွင့်ကား နောက်အဖုံးကို ခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးသွားတဲ့အခါမှာ နေရာကျယ်ရတဲ့အတွက် အလွန်အသုံးဝင် အဆင်ပြေတဲ့ ကားမျိုးကို ခေါ်ပါတယ်။ ခရီးတထောက်နားတဲ့အခါ၊ ပျော်ပွဲစားထွက်တဲ့အခါ ကားနောက်ဖုံးကို ဖွင့်ပြီး ပါလာတဲ့ စားသောက်စရာများကို နောက်ခန်းထဲမှာ ခင်းကျင်းစားသောက်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားကစားကို နှစ်သက်အားပေးကြတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတော့ tailgate party ကို အများအားဖြင့် ပြိုင်ပွဲမစမှီ ကစားကွင်းအပြင်ဖက်မှာ မိတ်ဆွေတွေ၊ မိသားစုဝင်တွေစုပြီး တပျော်တပါး ချက်ပြုတ်စားသောက်ကြတာကို ခေါ်ဆိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် hot dog အစားသွတ် ဝက်အူချောင်းကို အသားညပ်ပါးမုန့်နဲ့ စားဖို့ပါလာတဲ့ မီးဖိုမီးကင်ပြီး တခြားအစားအစာတွေနဲ့အတူ တဦးတယောက်ရဲ့  ကားနောက်ဖုံးမှာ ခင်းပြီးစားသောက်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတော့ Super Bowl ဘောလုံးပွဲကြီးဟာ လူအများအပြား ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ အားကစားပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကစားကြတဲ့ ဘောလုံးပွဲတွေကိုလည်း လိုက်ဖက်တဲ့ အမည်များ ပေးထားပါတယ်။ ဥပမာ – ဝါရှင်တန်အသင်းကို Washington Redskins, New York Giants စသည်ဖြင့် ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။
ဘောလုံးသွားကြည့်ကြတဲ့ ပရိသတ်အချို့  tailgate party လုပ်တဲ့အကြောင်း George Crows ပေးထားတဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
We hadagreat tailgate party before the Washington Redskins played the New York Giants. That was the only good part of the day. The Giants beat our Redskins by 21 points.
Washington Redskins အသင်းနဲ့ New York Giants အသင်းတို့ ပွဲမစခင်က ကျနော်တို့ ကားနောက်ဖုံးဖွင့်ပါတီ လုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနေ့အဖို့ ဒါက ကျနော်တို့အတွက် ဒီပါတီက ပျော်စရာတဒင်္ဂအချိန်လေးပါ။ Giants အသင်းက ကျနော်တို့ အားပေးတဲ့ Redskins အသင်းကို (၂၁) မှတ်နဲ့ အနိုင်ကစားသွားခဲ့တယ်။
နောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့် ပါတီတမျိုးကတော့ baby shower ဖြစ်ပါတယ်။ Baby = ကလေးငယ်၊ Shower ကတော့ အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ နာမ်အဖြစ်သုံးထားပြီး လက်ဆောင်တွေ စုပေးတာလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် baby shower က ကလေးမျက်နှာ မမြင်ခင် မိခင်လောင်းကို ဝိုင်းပြီးတော့ ကလေးပစ္စည်းတွေ လက်ဆောင်ပေးကမ်းကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့ မြန်မာဓလေ့မှာတော့ မျက်နှာမြင်ပြီး လသားအရွယ်မှ ကလေးကင်ပွန်တပ်တာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံ ထုံစံအရတော့ အမျိုးသမီးတဦး ကိုယ်ဝင်ဆောင်စဉ်မှာ အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေ၊ ဆွေမျိုးတွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက ဝိုင်းပြီးကလေးပစ္စည်းတွေ လက်ဆောင်ပေးကြပါတယ်။
တနည်းဆို မီးနေဝင်ချိန်၊ မီးဖွားပြီးချိန်မှာ မွေးကင်းစ ကလေးငယ်အတွက် အိပ်ယာခင်း၊ ကလေးအဝတ်အစား၊ အရုပ်ကစားစရာ၊ အသုံးအဆောင် စသည်တို့အပြင် မိခင်အတွက် အသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို ငွေစုထဲ့ပြီး ဝယ်ပေးကြတဲ့ တပျော်တပါး စားသောက်ကြတဲ့ပါတီမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေကြီးလုပ်တဲ့ အမျိုးသမီးပါတီ ဖြစ်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတဦးက သူ့အိမ်မှာ တာဝန်ယူ စီမံပေးတဲ့ baby shower မိခင်လောင်းပါတီပွဲမှာ အဖိုးဖြစ်မယ့်သူက သူမြေးရတော့မယ်အကြောင်း ပြောတဲ့ George Crows ပေးတဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Tomorrow is Susan’s baby shower. I will be really happy to haveagrandchild, but seems like only yesterday she wasalittle girl herself. Now, she will beamother. Where does the time go? I wonder.
မနက်ဖြန်ရောက်ရင်တော့ Susan ရဲ့  မိခင်လောင်းပါတီပွဲ လုပ်ကြမယ်။ ကျနော်ကတော့ အဖိုးဖြစ်ရတော့မှာမို့ အတော်ပျော်ပေမဲ့ ကျနော်စိတ်ထဲ ကျနော့်သမီးက မနေ့ကပဲ ခလေးတယောက်လိုပဲ ရှိသေးတယ်လို့ ထင်မိခဲ့တယ်။ အခုတော့ သူကိုယ်တိုင် မိခင်တယောက် ဖြစ်လာတော့မယ်။ အချိန်တွေ ဘယ်လိုကုန်သွားပါလိမ့်လို့ ကျနော် အံ့သြတွေးနေမိတယ်။
Special Sale ဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ
early bird sale, door buster နဲ့ black Friday sale တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်္ဘာလ ၂၆ (ကြာသပတေး) ရက်နေ့မှာ Thanksgiving ခေါ် ကျေးဇူးတော်နေ့အပြီး ခရစ်စမတ် (Christmas) ပွဲတော်နဲ့ နှစ်သစ်ကူး (New Year) ပွဲတော်တို့ ဆင်နွှဲကြတဲ့ ပွဲတော်ရက်ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံသားအများစုက လက်ဆောင်တွေ အချင်းချင်းပေးကြဖို့အတွက် ဈေးဝယ်ထွက်ရတဲ့ ကာလကြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးဝယ်ရရင် မမောနိုင်မပန်းနိုင် (shop till you drop) ဆိုတဲ့ ခြေကုန်လက်ပန်းကျတဲ့ အထိ ဈေးဝယ်ကြသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လည်း ဒီကာလမှာ ဈေးဆိုင်တွေကလည်း အရောင်းသွက်ရလေအောင် သူထက်ငါ ဈေးလျှော့ရောင်းတဲ့ ကြော်ငြာတွေကို သတင်းမီဒီယာတွေကတဆင့် အပြိုင်အဆိုင် ကြော်ငြာကြပါတယ်။
အထူးဈေးနှုန်းတွေနဲ့ လျှော့ရောင်းတဲ့ ပထမဦးဆုံး အီဒီယံအသုံးက early bird sale ဖြစ်ပါတယ်။ Early = စောစော၊ Bird = ငှက်၊ Sale = အထူးဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ early bird စောစောထတဲ့ ငှက်ကတော့ The early bird always getsaworm ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားပုံမှာ ယူထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ တီကောင် ရှာစားတဲ့ ငှက်က မနက်စောစောထ ရှာမယ်ဆိုရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ တီကောင်အစာကို ရစမြဲလို့ ဆိုလိုပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ဦးရာလူ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာ ဘယ်နေရာမဆို တန်းစီပြီး စည်းကမ်းတကျ ဝယ်ယူရတာမို့ early bird sale က ဆိုင်ဖွင့်ဖွင့်ချင်း ပထမရောက်ပြီး တန်းစီ စောင့်နေတဲ့ လူတွေက ဒေါ်လာတစ်ရာတန်တဲ့ ပစ္စည်းကို တဝက်ဈေးနဲ့ လျှော့ပြီး ဆိုင်ဖွင့်စ နာရီပိုင်းမှာ ဈေးနှုန်းချိုချိုနဲ့ ရောင်းမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ဦးရာလူက ဝယ်ယူနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ early bird sale ကို ဦးရာလူဝယ်ခွင့်ရရှိခြင်း လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး ဦးရာလူ ဈေးလျှော့ရောင်းတဲ့အကြောင်း ရေဒီယိုက ကြော်ငြာပုံ ဥပမာကို George Crows တင်ပြပေးထားတာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Tomorrow, Saturday Save, Save, Save, at the early bird sale at Mann’s furniture store. Everything is thirty percent off. Doors open at 6, and prices are good until 10 o’clock.
မနက်ဖြန် စနေနေ့မှာ ဦးရာလူလျှော့ဈေးကို Mann ပရိဘောဂဆိုင်မှာ ရောင်းမှာမို့ ဈေးနှုန်း အထူးသက်သာကြပါတယ်။ ပစ္စည်းအားလုံးကို သုံးဆယ် ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ရောင်းသွားပါမယ်။ ဆိုင်တံခါးကို မနက် ခြောက်နာရီ စဖွင့်ပြီး ဆယ်နာရီအထိ ဒီလျှော့ဈေးနဲ့ ရောင်းချသွားမယ်။
နောက်ထပ်တင်ပြပေးထားတဲ့ အီဒီယံအသုံးကတော့ door buster ဖြစ်ပါတယ်။ Door = တံခါး၊ ဝင်ပေါက်၊ Buster = ဖြိုခွင်းသူ၊ ဖောက်ဝင်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။ လုံးကောက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ တံခါးကို အတင်းထိုးဖောက်ဝင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး ကုန်ပစ္စည်းတွေကို အထူးလျှော့ဈေးနဲ့ ရောင်းချနေချိန်မှာ ဈေးဆိုင်ဖွင့်ချိန် အစောပိုင်းနာရီပိုင်းအတွင်း ရောင်းချတာဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးက သက်သာတဲ့အတွက် ဝယ်သူတွေက သူထက်ငါ အလုအယက် တံခါးကို ချိုးရိုက်ပြီး ဝင်တော့မဲ့ ပုံစံမျိုးကို ရည်ညွှန်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်တိုက်တတိုက်က ဒီအသုံးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းစာထဲမှာ ကြော်ငြာထဲ့ထားတာကို ဖတ်လိုက်ရတဲ့ ခင်ပွန်းသည်တဦးက ဇနီးကို ပြန်ပြောဟန်အကြောင်း George Crows ရဲ့  ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Hey, honey if we are going to that sale, let’s go early. One of the door busters they have until 10 o’clock is video tapes at 99 cents! And, I’d like to get at leastadozen.
ကဲ အချစ်ရေ အဲဒီ လျှော့ဈေးရောင်းတာကို စောစောသွားကြရအောင်။ ဆိုင်တံခါးဖွင့်ဖွင့်ခြင်း ရောင်းမဲ့ လျှော့ဈေးတွေထဲမှာတော့ ဗွီဒီယို အခွေတွေ တခွေကို ၉၉ ပြားနဲ့ ဆယ်နာရီထိ ရောင်းမှာမို့ ကိုယ်တော့ အနည်းဆုံး တဒါဇင်လောက် ဝယ်ထားချင်တယ်။
နောက်ဆုံးတင်ပြပေးထားတဲ့ အီဒီယံအသုံးကတော့ black Friday sale ဖြစ်ပါတယ်။ Black = အနက်၊အမည်းရောင်၊ Friday = သောကြာနေ့ နဲ့ Sale = ရောင်းသည် တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ စကားစုတခုလုံးရဲ့  လုံးကောက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ အထူးလျှော့ဈေးနဲ့ ရောင်းပေးတဲ့ အမဲရောင် သောကြာနေ့ လို့ တိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ကျေးဇူးတော်နေ့ (ရုံးပိတ်ရက်) နောက်တရက် သောကြာနေ့မှာ တချို့ ရုံးအလုပ်တွေ ရက်ရှည်ဆက်ပိတ်သလို၊ ရုံးမပိတ်သူများကလည်း ခွင့်တွေယူပြီး အထူးလျှော့ဈေးချတဲ့ သောကြာနေ့မှာ ဈေးဝယ်သူတွေ အလုအယက် ဈေးဝယ်ကြပါတယ်။ ဆိုင်တွေကလည်း ဒီရက်ရှည်ရုံးပိတ်ရက်မှာ သူထက်ငါ အပြိုင်အဆိုင် ဈေးလျှော့ချခါ ရောင်းချကြပါတယ်။
Black Friday အသုံးအနှုန်းက စာရင်းကိုင်ပညာမှာ အရောင်းဆိုင်တဆိုင် အနေနဲ့ အရှုံးပြနေရင် မင်နီနဲ့ စာရင်းပိတ်ရတဲ့ အခြေအနေရှိပြီး အမြတ်ပြရင်တော့ မင်အမည်းနဲ့ စာရင်းပိတ်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် Black Friday က အမြတ်တွေ အများကြီးရတဲ့အတွက်ကြောင့် ရောင်းစာရင်းပိတ်တဲ့အခါမှာ မင်အမည်းနဲ့ စာရင်းပိတ်ရကနေ ဆင်းသက်လာတာပါ။ တနည်းအားဖြင့် Black Friday ဟာ ကျေးဇူးတော်နေ့ပြီး နောက်တရက် ရောင်းအားကောင်းတဲ့ အမြတ်တွေ အများကြီးရတဲ့ သောကြာနေ့ ကို ခေါ်ပါတယ်။
ဒီအသုံးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး George Crows ပေးထားတဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Bargain shoppers headed to the nation’s stores and malls before sunrise this Black Friday to get specials on everything from toys to wide screen TVs.
လျှော့ဈေးနဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ဝယ်ကြဖို့ နိုင်ငံတဝှမ်းက ဈေးဆိုင်တွေ ကုန်တိုက်ကြီးတွေကို ဒီ ကျေးဇူးတော်နေ့အပြီး သောကြာနေ့မှာ လျှော့ဈေးရှာဝယ်သူတွေ က နေမထွက်ခင်ကတည်းက ဆိုင်တွေကို တက်သုတ်ရိုက် ပြေးကြတော့တယ်။ ခလေးကစားစရာ အရုပ်လေးတွေက အစ မြင်ကွင်းကျယ် တီဗွီတွေ အဆုံး အထူးလျှော့ဈေးနဲ့ ဝယ်ယူကြပါတယ်။
straight face နဲ့ straight man တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး တင်ပြပေးမယ့် အီဒီယံ အသုံးအနှုန်းမှာ Straight face ဖြစ်ပါတယ်။ Straight = တည့်မတ်သည်၊ Face = မျက်နှာ တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ စကားစုတခုလုံးရဲ့  လုံးကောက် အဓိပ္ပါယ်ကတော့ တည့်မတ်တဲ့မျက်နှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံအသုံး သွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ရယ်စရာ တွေ့လို့ မရယ်မမော မြိုသိပ်ထားခြင်း၊ မျက်နှာ တည်တည်ထားရတဲ့ အနေအထား၊ တနည်းဆိုရင် ခံစားချက် အမူအရာကို မပြဘဲ မျက်နှာကို တည်တည်ထားခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သူတပါးကို နောက်ပြောင်ပြီး မိမိ လက်ချက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ မသိအောင် မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး မျက်နှာကို ရှုတည်တည် ထားခြင်း၊ မျက်နှာပိုးသပ်ထားတဲ့ မျက်နှာမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်။
အောက်ပါ ဥပမာကတော့ ပျော်ပွဲစားတခု ထွက်ရာမှာ ကိုယ့်ဆရာသမား လှေစီးဖို့ လှေပေါ်ကို အတက်မှာ မတော်လို့ ရေထဲချော်ကျသွားတာကို မြင်ရတဲ့ တပည်က မရယ်မိအောင် မနည်းထိန်းထားရတဲ့ George Crows ပေးမယ့် ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
When I saw him climb out all wet and muddy, it was so funny. It was hard to keepastraight face. But, I knew if I laughed, I’b be in trouble at the office next day.
သူ့ တစ်ကိုယ်လုံး ရေတွေ ရွှံ့တွေလူးပြီး မြင်ရတော့ သိပ်ကို ရယ်စရာ ကောင်းလှလို့ မရယ်မိအောင် မနည်းထိန်းချုပ် ထားရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော် သိပါတယ်။ ကျွန်တော် ရယ်မိရင်တော့ နောက်တနေ့ ရုံးရောက်ရင် ကျနော့်ကို ပြဿနာလုပ်မှာ သေချာတယ်။
မျက်နှာကို ဣနြေ္ဒမပျက် ထားနိုင်ရင် ခပ်တည်တည် ထားနိုင်ရင် တခါတရံတော့ သိပ်ကို အသုံးဝင်လှပါတယ်။ ဒီအချက်က အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ကစားတဲ့ ပိုကာ (poker) ဖဲဝိုင်းမှာ အထူး အသုံးဝင်ပါတယ်။ ပိုကာ ကစားဝိုင်းမှာ ကစားသမားတွေက တယောက် မျက်နှာ တယောက် ကြည့်ပြီး သူ့ဖဲကိုယ့်ဖဲ အခြေအနေကို ခန့်မှန်း ကြပါတယ်။ ဖဲကောင်းတဲ့ မျက်နှာ ဖဲမကောင်းတဲ့ မျက်နှာ ဘယ်လိုဆိုပြီး အကဲခတ်လေ့ ရှိရာမှာ ကိုယ့်ဖဲ ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း ဘယ်လောက်အခြေအနေ ဆိုးဆိုး မျက်နှာအမူအရာ ဣနြေ္ဒကွယ်ဝှက်ထားနိုင်တဲ့ ဖဲသမားက တပန်းသာပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မျက်နှာသေ ထားနိုင်တယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ယူရင်တော့ ပိုပြီသင့်တော်ပါလိမ့်မယ်။
ညီမဖြစ်သူက ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ ဘယ်လောက်တော်တဲ့အကြောင်း George Crows ပေးတဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။
“Sue usually wins the poker. She keeps the same straight face whether she has four aces or nothing at all in her hand. Her cards usually surprise you, so be ready to lose some money.”
“Sue တယောက်က ပိုကာ ကစားတဲ့အခါ အများအားဖြင့် နိုင်လေ့ရှိပါတယ်။ သူ့ လက်ထဲမှာ တစ်ဖဲ လေးချပ်လောက် ရှိနေရင်ဖြစ်စေ၊ သူလက်ထဲမှာ ဘယ်ဖဲ ကောင်းကောင်းမှ မရှိတဲ့အခါဖြစ်စေ သူက မျက်နှာသေနဲ့ သိပ်ကို နေနိုင်တယ်။ သူ့ ဖဲတွေဟာ အများအားဖြင့် မမျှော်လင့်တဲ့ ဖဲတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ခင်ဗျား သူ့ကို ဖဲရှုံးပြီး ငွေပေးဖို့သာ ပြင်ပေးတော့။”
Straight ကို အခြေခံတဲ့ နောက်တင်ပြပေးမယ့် အီဒီယံအသုံးကတော့ straight man ဖြစ်ပါတယ်။ Straight = ဖြောင့်သော၊ မတ်သော၊ Man = လူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြောင့်မတ်သောလူ၊ တည်တည်တန့်တန့် ရှိသောလူ လို့ လုံးကောက်အဓိပ္ပါယ် ပြန်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အီဒီယံ အသုံးမှာတော့ သူတပါး ပေါ်လွင် ထင်ရှားဖို့အတွက် အဖြည့်ခံ လူလို့ အဓိပ္ပါယ် ဆောင်ပါတယ်။
အခုတင်ပြပေးမယ့် ဥပမာမှာ လူရွှင်တော်က မြူးသလောက် သူက ထုံအအကြီးနဲ့ နေရလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြဇာတ်ရုံတွေက ဆင်းသက်လာတဲ့ စကားဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန် ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်တွေမှာ ဒီလို အဖြည့်ခံ သရုပ်ဆောင်ရသူက ကင်မရာရှေ့ မှာ ရပ်နေရပြီး သူပြောတဲ့ စကားအပေါ် လူရွှင်တော်က ပြက်လုံးဟာသထုတ်လေ့ ရှိပါတယ်။ တခါတလေမှာ သူကို ပစ်မှတ်ထားပြီး လူရွှင်တော်က ပြတ်လုံးထုတ် တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအလုပ်မျိုးကို လူတကာတော့ သိပ်မလုပ်ချင်ကြ ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ သူက ထုံအအ နဲ့ အဖြည့်ခံရသူဖြစ်ပြီး ပရိသတ်က လူရွှင်တော်ကိုဘဲ ပွဲကျကြလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမအနေနဲ့ ကမ္ဘာကျော် ဟာသ သရုပ်ဆောင်တဦးအတွက် အဖြည့်ခံ သရုပ်ဆောင် လုပ်ရပုံအကြောင်း George Crows ပေးတဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
My job asastraight man is to set up his jokes and act dumb, so he can make people laugh at me. He pays me well though. He knows I won of the best straight man in the business, and he wouldn’t be half as funny without me.
သူ့အတွက် အဖြည့်ခံလူအဖြစ် ကျွန်တော် လုပ်ပေးရတဲ့ တာဝန်က သူ့ ပြက်လုံးတွေကို သရုပ်ဆောင်ပေးရပြီး ခပ်ထုံထုံနဲ့ နေပေးရတယ်။ ဒါမှ ကျနော်ကို ကြည့်ပြီး ပွဲကြည့်သူတွေ ရယ်အောင် သူက လုပ်နိုင်မယ်။ သူက ကျနော်ကို ပိုက်ဆံ အတော်များများ ပေးပါတယ်။ ကျနော်ဟာ သူ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းမှာ လူထုံလူအ အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ရာမှာ အကောင်းဆုံး တယောက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သူ သိနေပါတယ်။ ကျနော် မပါဘဲနဲ့ဆိုရင် သူ့ သရုပ်ဆောင်မှုက ရယ်စရာ ကောင်းမှာ မဟုတ်ဘူး။